Atena Faraghdani, Nosazian’i Iràna Hifonja 12 Taona sy Tapany Noho Ny Resaka Sariitatra · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, Català, English
Atena Farghadani niatrika fitsaràna ny Talata 18 May, noho ny fanenjehana azy ho naniratsira mpikambana ao amin'ny parlemanta sy nanao fampielezankevitra manohitra ny governemanta. Sary: Pejy Facebook “Afaho i Atena”.
Lahatsoratra nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ity ary naverina navoaka eto ho fiarahana miasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Ho an'ny Zon'Olombelona ao Iràna.
Nohelohin'ny Fitsarana Revolisionera iray ao Tehran ilay mpanakanto sady mpikatroka momba ny zon'olombelona, Atena Faraghdani, hifonja 12 taona sy tapany noho ny nanaovany sary sy votoaty manakiana ny governemanta, izay nakarin'ilay tanora mpikatroka ho ao amin'ny pejiny Facebook.
Tao anaty tafa iray ho an'ny Fanentanana Iraisampirenena Ho an'ny Zon'Olombelona ao Iràna, nolazain'i Mohammad Moghimi, mpisolovava an'i Faraghdani, fa tokony hihena ho 7 taona sy tapany ilay sazy, araka ny Artikla 134 amin'ny Lalàna Famaizana Islamika vaovao ao amin'ny firenena. Milaza io artikla io fa ny famaizana dia tazonina ho izay fanasaziana ela indrindra nomena raha toa ny olona iray ka miatrika fiampangàna marolafy.
Nomarihan'i Moghimi fa ny didy navoakan'ilay mpitsara dia tokony “nijery” ilay artikla 134. Nampian'ilay mpisolovava fa 7 taona sy tapany no “sazy betsaka indrindra ho an'ny raharaha ‘ fivoriana sy firaisana tsikombakomba manohintohina ny filaminam-pirenena’” (ny vesatra henjana indrindra anenjehana azy).
“Mbola tsipika mena tsy azo ihoarana ao Iran ny fanehoana ampilaminana ny tsy fitovian-kevitra,” hoy i Hadi Ghaemi, Tale Mpanatanterak'ilay Fanenantanana. “Dingano io fa mety higadra mandra-maty ianao.”
Nampian'i Ghaemi fa atahoran'ireo manampahefana manokana ny tambajotra sosialy, izay lasa nalaza be tokoa ao Iràna, indrindra fa eny anivon'ny tanora. Nandravarava mihitsy ireo manampahefana nanenjika ireo votoaty rehetra notsarainy tety anaty aterineto, na dia mifanalavitra amin'ny fanakianana ny politikam-panjakana aza.
“Namely azy sy ny tenako ny fanapahankevitry ny fitsarana androany [1 Jona 2015]. Manana 20 andro hanaovana fampakarana ny didy izahay, ary manantena fa handrava azy io ny Fitsaràna Ambony,” hoy i Moghimi, mpisolovava an'i Faraghdani.
Ny vesatra anenjehana ilay mpikatroka mafàna fo dia “fivoriana sy firaisana tsikombakomba manohintohina ny filaminam-pirenena,” “fampielezankevitra manohitra ny fanjakana,” ary “faniratsiràna ny Mpitarika Faratampony, ny Filoha, ny Mpikambana ao amin'ny Parlemanta, ary ireo olona roa avy amin'ny Efitrano 2-A – IRGC [Mpiambina ny Revolisiona] [naka am-bavany azy].”
Rehefa nahavita dimy volana tany amin'ny Fonja Gharchak sy Evin izy, dia niatrika fitsarana tao amin'ny Sampana faha-15-n'ny Fitsarana Revolisionera ao Tehran i Faraghdani, fitsarana teo ambany fiadidian'ny mpitsara Salavati, mpitsara iray manana ny toerany ary notsongaina manokana noho ireo sazy henjana sy lavabe avoakany mba hitarika ireo fotoam-pitsarana raharaha momba ny “filaminam-pirenena” izay anenjehan'ireo fikambanana mpitsikilo sy mpiandraikitra filaminana an'ireo mpanao politika sy sivily mpikatroka mafàna fo. Salavati no ilay mpitsara niandraikitra ny fitsarana an'i Jason Rezaian, mpanangom-baovaon'ny Washington Post.
Nomarihan'i Moghimi fa iray amin'ireo porofo entina manenjika ny olona arovany ny nizaràny tao amin'ny pejiny Facebook ny sariitatra iray mampitovy amin'ny biby ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta Iraniana. Ny porofo hafa dia ahitàna ireo fanakianana nosoratan'i Faraghdani, navoaka tao amin'ny Facebook koa, ary ny fitsidihany ny fianakavian'ireo gadra noho ny politika sy ireo mpanao hetsi-panoherana izay maty tany amin'ny Foibe Famonjan'ny Polisy tao Kharizak tamin'ny 2009, tamin'ny fifandonana taorian'ilay fifidianana izay ho filoham-pirenena niteraka resabe tao Iràna.
“Araka ny lalànantsika, tsy voafaritra ho isan'ny heloka bevava ny zavatra atao any anaty tambajotra sosialy. Any amin'ny firenena demaokratika, fomba fanao azo ekena ny fanaovana sariitatra ho entina manakiana ireo eo amin'ny fitondrana. Mpanakanto naneho ny eritreriny tamin'ny alàlan'ny fanaovana sariitatra no olona arovako, ary nikendry ny hanakiana ireo eo amin'ny fitondrana,” hoy i Mohammad Moghimi tamin'ilay Fanentanana.
“Ankoatra izay, ny artikla faha-8 ao amin'ny Lalàm-panorenana Iraniana dia milaza fa andraikitry ny tsirairay ny ‘misoroka ny tsy fetezana ary mampiroborobo ny soatoavina’ ary andraikitra mifamaly io ho an'ny firenena sy ny fanjakana manoloana ny andaniny sy ny ankilany. Ny fanehoana fanakianana koa dia ampahany amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny,” hoy i Moghimi .
Ny 24 Aogositra 2014, nosamborin'ireo mpitandro filaminana i Atena Faraghdani, sivily mpanao sary sady mpikatroka mafàna fo, ary nalefa tany amin'ny Efitrano 2-A – IRGC nisy azy tao anatin'ny Fonja Evin. Ny 2 Novambra 2014, navotsotra izy rehefa nampandoavina onitra. Taty aorana dia namoaka lahatsary nahitàna azy izy, ao anatin'izany no nilazany fa an-kerisetra tokoa no nanaovan'ireo vehivavy mpiambina ny fisavàna azy tao amin'ilay toerana fanokàna-monin'ny Fonja Evin. Nasaina niboridana izy, hoy izy, izay nolaviny. Betsaka no nijery ilay lahatsary ary niady hevitra momba izany tety anaty tambajotra sosialy.
Taorian'ny namoahana ilay lahatsary, nampanantsoin'ny Sampana faha-15-n'ny Fitsarana Revolisionera ao Tehran i Faraghdani ny 10 Janoary 2015, nosamborina, ary nalefa any amin'ny Fonja Gharchak any Varamin, ivelan'i Tehran.
Niditra tamin'ny fitokonana tsy hisakafo i Atena Faraghdani ho fanoherany ny namindràna azy ho any amin'ilay fonja tsizarizarin'i Gharchak, toerana izay ifampitankosonan'ireo gadra noho ny politika amin'ireo nahavita heloka bevava, manitsakitsaka ny fepetra momba ny tokony hanasarahana ny voafonja.
Taorian'ny niharatsian'ny toe-pahasalamany dia nafindra ho ao amin'ny hopitaly iray izy ny 26 Febroary 2015, ary nandidy ny hamerenana azy ao amin'ny fonjan'i Evin ireo manampahefana ara-pitsarana ny 2 Martsa, toerana izay misy azy hatramin'izao.